China bovine collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-collagen yesibongo icutshungulwa ngaphansi kwezimo ezine-alkaline, bese ikhishwa emanzini ashisayo futhi ihlanzwe, iqine futhi yomiswe ngenqubo yesinyathelo nesinyathelo ukukhiqiza umkhiqizo ocebile ngezakhi.
I-collagen yesibongo senziwa ngesikhumba esisha senkomo, sicutshungulwa inzalo yokushisa okuphezulu, futhi sihlanganiswe nobuchwepheshe obuphambili bokukhipha ukuhlukanisa amaprotheni asezingeni eliphakeme esikhunjeni. Ngemuva kokukhipha amakholomu, ukukhipha isisu, ukugxilisa, ukumisa nokuchoboza, umkhiqizo owenziwe ngokuqukethwe okuphezulu kwe-peptide.
I-collagen yesibongo yiprotheni elenzeka ngokwemvelo elikhona ezicutshini ezihlangene, amathambo, uqwanga nezikhumba zezinkomo. Imvamisa i-collagen engeza ozibona ezitolo itholakala kwizikhumba zezinkomo. Kunezinhlobo eziningana ze-collagen, ngayinye enama-amino acid ahlukile. I-collagen evela ezinkomeni ifana ne-collagen esinayo emizimbeni yethu.
Ukwehliswa kwe-collagen kwenzeka ngokwemvelo ngokukhula, ngaleyo ndlela kukhuthaze ukuvela kwemibimbi, komise isikhumba futhi kuqede lokho kukhanya kobusha, kwamazolo owake wakuthatha kalula. Ngasohlangothini oluqhakazile, izengezo ze-collagen zingasiza ukuphatha inqubo yokuguga. Kokunye ukuhlola, u-15% wabesifazane abathathe isengezo esine-hydrolyzed Type I collagen (uhlobo olukhona ku i-collagen yezinkomo), yayinemigqa embalwa ebusweni nemibimbi ngemuva kwezinsuku ezingama-60, ama-32% abesifazane babenezinga lokuguga isithombe (ukulimala kwesikhumba okubangelwa ukuvezwa yilanga isikhathi eside), kanti ama-39% asekele umswakama wesikhumba. ukuqina kwesikhumba ngemuva kwamasonto amane.
I-Collagen yingxenye ebalulekile yomzimba womuntu. Ibamba umzimba ndawonye futhi isekele ukwakheka komzimba wonke. Ukwengezwa okufanele kwama-bioactive collagen peptides esemncane, njengei-collagen yezinkomo kusuka eGelken, ukugcina impilo enempilo kuyisiqalo esihle sokulwa nokuguga nokugcina ukusebenza komzimba.
• Ukuvimbela i-osteoporosis; Thuthukisa amalunga wezempilo ngokuhlanganyela, ukuvikela nokulungisa;
• Isikhumba esiqinile futhi esihle, yenza isikhumba sibe nethenda, sibushelelezi, siqine futhi sinwebe; Izembatho zempi ezinhle; Isifuba esinothile;
• Yehlisa isisindo somzimba futhi uhlale uphilile; Thuthukisa ukuzivikela komzimba womuntu.